Yohane Adiyisɛm 2 NA-TWI - Efeso asafo no nhoma - “Kyerɛw - Bible Gateway
Yohane Adiyisɛm 1Yohane Adiyisɛm 3
Yohane Adiyisɛm 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 “Kyerɛw krataa kɔma ɔbɔfo a otua Efeso asafo no ano, na ka kyerɛ no se: Eyi ne nsɛm a efi obi a okita nsoromma ason wɔ ne nsa nifa mu a, ɔnantew wɔ sika akaneadua ason no ntam no. 2 Minim nea woayɛ. Minim nsi a wode ayɛ adwuma ne boasetɔ a wowɔ. Minim sɛ wunnye nnebɔneyɛfo, na afei woasɔ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho asomafo nanso wɔnyɛ bi no ahwɛ na woahu sɛ wɔyɛ atorofo. 3 Wowɔ boasetɔ na me nti, woahu amane bebree, nanso wompaa abaw.